(Dhegayso) Abukaate Cabdikariin Xariga Daljir waxaa loo maray wado sharci daro ah inay sii xirnaatana waa sharci darro kale – Radio Daljir
Juunyo 30, 2016 3:46 g 0
Xarumaha Radio Daljir ee magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso ayaa maamulka Puntland u xiran ilaa 23 kii bishan June, talaabadda xiritaanka xarumahaasi ayaa lagu tilmaamay sharci daro, Abukaate Cabdikariin Maxamuud Faandhe oo ah sharci yaqaan ku takhakhusay qawaaniinta ayaa sheegay in talaabadaasi tahay mid sharci daro ah oo Dawladdu sharciga baal martay.
“Waxaa lagu micnayn karaa sharciga oo laga talaabsaday Idaacaddu waxay leedahay xaquuq, hadii markii hore sharci darro lagu xiray waxay ahayd in 24 saac ama 48 saac gudahooda maxamad lagu keeno may dhicintaasi markaa sharci daradii bay weli kusii xiran tahay”, ayuu yiri Garyaqaan Cabdikariin.
Isagoo ka hadlayey dacwad ay Daljir dawladda ka gudbisey oo taala Maxkamadda sare ayuu sheegay inay tahay bilow fiican oo saxaafadda xorta ahi samaysay hadii dacwadaas si cadaalad ah loo qaadana ay Daljir ku guulaysan doonto.
“Waa bilow fiican oo ay gaartey Saxaafadda xorta ah inay Idaacaddu dacwooto oo Maxkamadda sare kiis ka furato maadaama waxa la dacwaynayaa maamul yahay waa bilow fiican, hadii lagu qanci waayo go’aanka Maxkamadda waxay qaadanaysaa dib u eegis uu samayn doono gudoomiyaha Maxkamadda sare”, ayuu hadalkiisa raaciyey.
Maamulka Puntland ayaa si sharci daro ah u xiray Radio Daljir xarumihiisa magaalooyinka waaweyn ee Puntland ku yaala kuwaasoo weli ugu xiran sharci daradii markii hore lagu xiray, Radio Daljir ayaa qabsaday qareen u dooda iyadoo dacwad ka dhan ah Xukuumadda Puntland ka furanaysa Maxkamadda Sare ee Puntland.
Daljir oo maalintii 8aad sharci-darro ku xiran!!!